Mpanamboatra sy mpamatsy siny mpitrandraka tany China MINYAN
Ho an'ny fihadiana amin'ny fiantraikany ambany, ny fitaovana fanosotra ambany toy ny loto, loam, ary ny fifangaroan'ny loto sy ny vatokely tsara. Ohatra: Ny fepetra mihady izay ananan'ny tendrony ny adidy ankapobeny dia mihoatra ny 800 ora. Amin'ny ankapobeny, ny dite General Duty dia ny habeny be mpitia indrindra, ary ampiasain'ny mpamolavola tranokala hitrandrahana betsaka amin'ny fampiharana abrasion ambany. Ny firafitra maivana dia mampihena ny fotoana lanin'ny entana ary mampitombo ny lanjany azo alaina. Adapter sy torohevitra mahazatra habe.
Ny siny mahazatra dia karazana malaza amin'ny excavator afovoany sy kely, mampifanaraka ny hatevin'ny takelaka mahazatra izy ary tsy misy teknika fanodinana miharihary. Ny toetra mampiavaka azy: lehibe ny siny, ny faritra amorom-bava dia lehibe ary manana fipetrahana lehibe, noho izany dia manana coefficient feno famenoana izy, mitsitsy fotoana sy asa mahomby. Ity siny ity dia mety amin'ny tontolon'ny asa maivana, toy ny fitrandrahana tanimanga sy ny famoahana fasika, tany ary vatokely. Ny fatiantoka dia ny hatevin'ny lovia dia kelikely, tsy fahampian'ny takelaka manamafy, noho izany dia fohy ny fotoana fanompoana.
Manolotra siny feno ho an'ny masinina izahay manomboka amin'ny 0.01cbm ka hatramin'ny 12cbm amin'ny fahafahan'ny siny ho an'ny fampiharana marobe. Ny fampiharana dia misy fanamboarana maivana sy ankapobeny, fanamboaran-dàlana sy lalamby ary koa indostrian'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy harena ankibon'ny tany.Izahay dia manamboatra ny siny marika rehetra amin'ny alàlan'ny vy avo lenta. Afaka manolotra miraiki-po izahay ho an'ny ankamaroan'ny mpitrandraka marika rehetra.
Ankoatry ny siny mahazatra, siny Rocky ary siny mavesatra, manolotra siny misy tanjona manokana koa izahay, toy ny sifotra Tilting, siny ankiben-drano Hydraulika, siny Skeleton, siny fanadiovana, siny fihazonana, kapoaka, sifotra sifotra, ripper, bucket ripper, bucket loader ary hafa fametahana ho an'ny excavator anao.Fonosana sy fandefasanaFivarotana fivarotana: singa tokanaKitapo fonosana tokana: 20X20X20 cmLanjany tokana: 60.000 kg
Karazana fonosana:Paleta na hazo mahazatra mahazatra. 1. 20GP iray dia mahazaka sombin-kazo 12-14 eo ho eo 1.0m3 na 1.2m3 ho an'ny excavator 20ton (Sakany latsaky ny 42 santimetatra) 2. ny 40HC iray dia mahazaka sombin-kazo 26-28 eo ho eo 1.0m3 na 1.2m3 ho an'ny excavator 20ton; 3. 20GP iray dia afaka mitondra siny 1.6m3 eo ho eo ho an'ny 30ton excavator; 4. ny 40HC iray dia afaka mamoaka siny 16.6m3 eo ho eo amin'ny excavator 30ton.
Quantity (Pieces) 1 - 2 3 - 10 11 - 20 > 20
Est. Time (andro) 15 35 49 Hifampiraharahana
Ho an'ny asa fitrandrahana ara-dalàna sy ny fametahana tanimanga, fasika na fitaovana malalaka hafa tsy misy potipoti-javatra na vato lehibe, ny endrika tsara indrindra dia manome antoka ny fananana mihady fatratra sy ny fahafaha-manao lehibe.
Kitapom-bary ho an'ny tranokala
Previous: Siny kely sotro kely 70 sakany
Manaraka: siny vato excavator